'काँग्रेस–एमालेका युवा नेताले सकेनन्, मैले आँट गरेँ' | Ratopati
राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
अब पनि नेतृत्व परिवर्तन भएन भने हामी प्रजा परिषद्को बाटोमा जान्छौँ : राजेन्द्र लिङदेन
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ९, २०७८ chat_bubble_outline2
राप्रपाको अध्यक्ष को हुने त ? कसले विकल्प दिन्छ त ? हाम्रो अध्यक्ष भए मात्र राप्रपा चल्छ भन्ने होइन । उहाँहरू नभए पनि राप्रपा चल्छ । उहाँले राप्रपामा आफ्नो विकल्प तयार पारिसक्नु भएको छ । मलाई धवल शमशेर राणाले अध्यक्षमा अगाडि सार्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैछु । नेतृत्व परिवर्तनको कार्यकर्ताको चाहना अनुसार म नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छु । नेतृत्व परिवर्तनको कुरा बाहिर आएजस्तौ होइन । हामी उहाँहरूलाई गाली गर्न चाहन्नौँ । उहाँहरू असफल भएको भए हामी विकल्पका रूपमा आउन सक्ने थिएनौँ । तर राप्रपाको दुई दशक दुःखद रह्यो । हामी राष्ट्रिय राजनीति पार्टी नै बन्न नसक्ने अवस्था आयो ।
पछिल्लो पार्टी एकीकरणमा मैले पार्टी अध्यक्षत्रयलाई भनेको थिएँ – तपाईंहरूलाई यो अन्तिम मौका हो । तर यो दुई वर्षमा उहाँहरूबीच एकता हुन सकेन । उहाँले पार्टीलाई बन्धक बनाउनुभयो । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टी इतिहासकै कमजोर किन भयो ? राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रप्रति यत्रो समर्थन देखिएको छ । तर हामी कमजोर भएका छौँ । अब नेतृत्व परिवर्तन भएन भने हामी प्रजा परिषद्को बाटोमा जान्छौँ । काँग्रेस, एमालेलाई असफल हुने छुट छ । तर हामीलाई त्यो छुट छैन ।
अहिले काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठूला भए पनि जनताको अगाडि मुख देखाउने अवस्था छैन । त्यसैले राप्रपा अगाडि आउन सक्नुपर्छ । राप्रपा बलियो भएमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन्छ । त्यसैले हामीलाई असफल हुने छुट नै छैन । यो राप्रपाका नेता कार्यकर्ताका लागि अग्नि परीक्षा हो । हामी ३१ वर्षदेखि राप्रपामा रहेको खराबीको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । अब हामी पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशनचन्द्र लोहनी र कमल थापाका कार्यकर्ता हुने कि स्वाभिमानी राप्रपाका कार्यकर्ता बन्ने भन्ने यो सुवर्ण अवसर हो ।
अब पार्टीमा नेतृत्व मात्र परिवर्तन मात्र हुँदैन । पार्टीमा रहेका गुटगत परम्पराको अन्त्य हुन्छ । राप्रपामा आएको परिवर्तन अन्य पार्टीका लागि पनि सन्देश हुन्छ । किनभने काँग्रेस, एमाले र माओवादीका युवा नेताहरूले आँट गर्न सक्नुभएन । नेतृत्व परिवर्तनको धक्कु लगाएर आफ्नो पद मात्र सुरक्षित गर्नुभएको छ । राप्रपाले नेतृत्व परिवर्तन गरेर उदाहरण बन्दै छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दा हाम्रा तीन जना अध्यक्षहरू तयार हुनुभएन । हामीले जबरजस्ती गर्नु परेको छ । अब राप्रपामा नेतृत्वको हस्तान्तरण पनि सहज हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिमा एउटा सरकार पूरा टिक्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज नहुँदा हो । नेतृत्वमा पुगिसकेपछि कि घिसारेरै हटाउनुपर्ने नत्र ब्रह्मनालसम्म पुग्नुपर्ने अभ्यास छ । मेरो उम्मेदवारी तपाईंको विरुद्धमा होइन । राप्रपा जीवित रहे मात्र तपाईं राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राप्रपा रहेन भने तपाईंको इतिहास कहाँ रहन्छ ? तपाईंले राप्रपाको कार्यकर्तालाई अलमलमा नपारिइदिनुस् । म फेरि पनि भन्छु तपाईंको विरुद्धमा यो उम्मेदवारी होइन । हाम्रो यो कदमले बलियो बनाउन छ । महिलाले ९ महिनासम्म बच्चा पाउन नसकेन भने चुरा चलाउनुपर्छ । हामीले चुरा चलाएका छौँ । उहाँहरू राप्रपाको आमा हो भने राजेन्द्र लिङदेन बच्चा हो । त्यसैले राप्रपा बाउन चुरा चलाउँदा अलिकति चस्स हुन सक्छ । पछि उहाँहरू मुस्कुराउनु हुन्छ । अब हामी रोकिने अवस्था छैन ।
धवल शमशेर राणालाई महामन्त्री हुने पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टीमा युवाको उपस्थिति बलियो देखिएको छ । अब हामी हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि सडक र सदनबाट अगाडि बढ्छौँ । संसद्मा दुई तिहाइ ल्याएर राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापन गर्छौँ । त्यो सम्भव नभए सडकबाट भएपछि हामीले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ । हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्धमा खरो उत्रिन्छ । मैले अहिलेसम्म पनि कहीँ पनि भ्रष्टाचार छैन । म जुनसुकै मन्दिरमा पनि घुम्न तयार छु । म ५६ वर्षको भएँ । अब पार्टी चलाउन सक्षम छु । आर्थिक रूपमा पनि पार्टीलाई समस्या हुने छैन । कुनै विदेशी शक्तिबाट पैसा लिने छैनौँ । हाम्रै कार्यकर्ताबाट पार्टी चलाउन सकिन्छ । अब पार्टीमा एक व्यक्तिलाई सात ठाउँमा जिम्मेवारी दिइने छैन ।
Nov. 26, 2021, 10:57 p.m. Dinesh Kumar
Yu Desh laye bachuna sabey le afnu sawrtha laye tayag nu parxa ra Hindu Rasytrya ra ko mul agenta liyera aagdi badnu parxa ra sanghiyata kariz garnu parxa raja laye rastrya parmokh banayera Desh laye waha ko Marg darsah le sala le Desh ko pm le Desh chalaunu parxa aba ko biklapa yu naye hu yu ewta chalnge ko rup ma xa yas laye safal garna partyl le awask kadam chalnu parda xa taki long time sama party ko chaap janta ma parnu parxa ramro kam garera
Nov. 25, 2021, 4:59 p.m. Narendra Upadhya
We fully support you Lingden ji! You are the face of our country- not only the RPP but the whole political system. I am not RPP supporter but I support your agenda of monarchy Hindu- Vedic- Buddhist- Kiranti our national dharma. All the best!
सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सव विधिवत् रुपमा सम्पन्न
लमजुङमा जिप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते (अपडेट)